DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA EPSON TX117 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Chọta na Wụnye Software maka Epson Stylus TX117
Ogologo oge gara aga, nhọrọ ọhụrụ na-adọrọ mmasị pụtara na netwọk Odnoklassniki, nke dị na onye ọrụ ọ bụla. A na-akpọ ya Ememe. O doro anya na ná ndụ onye ọ bụla nwere ụbọchị ncheta ma dị ịrịba ama, nke ha, mba, ezinụlọ, na ihe ndị ọzọ. Ma ugbua, ọ bụrụ na achọrọ gị, na mgbe ị gbasịrị ịme ihe dị mfe, a ga-egosipụta ezumike dị iche iche na ibe gị na OK. Ịgaghị echefu ihe ndị a, cheta ndị enyi, ndị ikwu ma chetara onwe gị n'oge. Ma olee otu ị ga-esi gbakwunye, ma ọ bụ akaebe, wepụ ezumike na profaịlụ Odnoklassniki gị?
Tinye ma ọ bụ wepụ ezumike na Odnoklassniki
Ịnwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ hichapụ ụbọchị kalenda na-acha ọbara ọbara na ibe gị na OK ma na njirimara zuru ezu nke saịtị netwọk mmekọrịta yana na ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka dabere na gam akporo na iOS. Anyị ga-atụle ụzọ nhọrọ abụọ a nke zuru oke, na-esochi nzọụkwụ ole na ole iji rụzuo ọrụ ahụ n'ụzọ gara nke ọma.
Usoro nke 1: Usoro zuru oke nke saịtị ahụ
Na weebụsaịtị Odnoklassniki, ị nwere ike ugbu a ịme ememe naanị site na listi ndị mmepe ahụ nyere. Ikike ịmepụta ụbọchị gị echefughị ​​echezọ maka ihe ndị a na-amaghị ama ugbu a enwere nkwarụ. Mana ka anyị nwee olileanya na ndị nwe akụ ahụ ga-enwe uche ziri ezi, a ga-enyeghachi ndị ọrụ nke saịtị ahụ nhọrọ a dị mfe.
Mepee ya na ihe nchọgharị ọ bụla Odnoklassniki. Gbanye na akụ ahụ site na ịpị nbanye na paswọọdụ, kwenye na ntinye na akaụntụ nkeonwe gị na bọtịnụ ahụ "Nbanye".
N'akụkụ aka ekpe nke ibe anyị, anyị na-agbada na igbe ọrụ ngwaọrụ na akara "More". Chọta ihe nchịkọta nhọrọ zoro ezo.
Ugbu a anyị na-ahụ kọlụm nke na-egosi. Ememe ma pịa ya LKM. Ịga na mpaghara dị mkpa maka ịmalite imegharị.
Na windo na-esote, anyị na-ahụ kalenda nwere ụbọchị ndị dị mkpa, ndị nke anyị na ndị enyi gị, ndị akara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha uhie uhie na ọbara ọbara. Site na ndabara, naanị otu ezumike onwe onye ka emepụtara na - akpaghị aka - ọ bụrụ na ị kwupụtara data a na ntọala profaịlụ. Ma ugbu a, anyị ga-agbalị ịgbakwunye ememe ọhụrụ site na ịpị bọtịnụ otu aha ahụ.
Chọta ụbọchị achọrọ site na enyemaka. Ị nwere ike iji ọchụchọ maka aha ezumike. Na logo nke ụbọchị ahọpụtara, pịa na akara ngosi ahụ "Họrọ". Emela! Emere ka ezumike ahụ tinye aka na ndepụta gị ma gosipụta ya na News Feed gị mgbe o mere.
Ọ bụrụ na achọrọ, ọ bụla ezumike agbakwunyere nwere ike wepụ ngwa ngwa. Iji mee nke a, na peeji nke ụbọchị ndị dị ịrịba ama na kalenda, gaa na nọmba achọrọ ma na foto ezumike pịa akara ngosi ahụ n'ụdị obere ntụpọ atọ edoziri nke ọma.
Na menu nke ụbọchị ncheta nke na - egosi, naanị otu nhọrọ - "Hichapụ"ihe anyị na-eme Ụbọchị ọmụmụ gị, nke akọwapụtara na data profaịlụ onwe gị, ya mere a pụghị iwepụ ya.
Usoro 2: Ngwa ngwa ngwa
Na ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka na ngwaọrụ gam akporo ma ọ bụ iOS, ọrụ njikwa ezumike nke onye ọrụ dị nnọọ ukwuu karịa na weebụsaịtị Odnoklassniki. Mana anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla na mmejuputa ha na omume.
Gbaa ngwa na smartphone ma ọ bụ mbadamba. Anyị na-enyefe nkwenye njirimara dịka usoro ntụrụndụ.
N'elu aka ekpe nke ihuenyo ahụ, anyị na-achọta akara ngosi nwere ogwe atọ ndị e mere n'usoro, ma gaa na ngwa ngwa ngwa.
Na ngwaọrụ toolbar, lee akara ngosi ahụ Ememe. Kpatụ ya ka ịbanye na ngalaba anyị chọrọ.
Akwukwo nke ememe ndi enyi nwere ihe omuma ihe meghere. Ma anyị kwesịrị ịkwaga na taabụ ọzọ. "My" maka imekwu ihe.
Iji mepụta ụbọchị ncheta ọhụrụ gị, pịa bọtịnụ ahụ "Tinye ezumike". N'okpuru ebe a, na ndepụta ahụ dị na ndabara, anyị na-ahụ ụbọchị nke ụbọchị ọmụmụ anyị.
Nke mbụ, gbalịa itinye ezumike site na listi ọrụ. Iji mee nke a, họrọ obodo obibi, chọta ụbọchị ziri ezi wee pịa "gbakwunyere" na nchịkọta ahọrọ.
N'adịghị ka ebe nrụọrụ weebụ OK, ngwa ahụ nwere ohere ịmepụta ụbọchị gị dị mkpa site na ụbọchị ọ bụla nke kalenda site na ịpị akara ngosi ahụ "Tinye ezumike onwe gị". Nke a nwere ike ịbụ ụbọchị ọmụmụ nke ụmụaka na ndị ikwu, agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ na oge ọ bụla ịchọrọ.
Anyị na-ede aha aha ezumike ahụ n'usoro kwesịrị ekwesị, dezie ụbọchị ahụ kpọmkwem ma mechie usoro ahụ site na iji aka na-emetụ akara ngosi "Tinye".
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, enwere ike ihichapụ ihe ọ bụla agbakwunyere na mbụ. Iji mee nke a, chọọ ụbọchị anyị wepụrụ, mepee menu n'akụkụ aka nri site na ịpị bọtịnụ nwere mkpịsị atọ ma pịa "Hichapụ ezumike".
Ya mere, ugbu a, ị maara otú e si agbakwunye na wepụ ezumike na weebụsaịtị Odnoklassniki na ngwa ngwa nke ngwa. Ị nwere ike itinye usoro ndị a n'ọrụ ma nabata ekele sitere na ndị ọrụ ndị ọzọ na ememe. Nwee nkwurịta okwu gị na oru ngo OK!
Hụkwa: Ihichapụ enyi na-enweghị ọkwa na Odnoklassniki